crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> November | 2018 | HimiloNetwork
Muuqaal cajiib ah – Adigoo dalxiisaya halagaaga shaqeeyo Barahaada Bulshada.
Himilo November 20, 2018	Leave a comment 390 Views
Muqdisho – Adeegga ‘Relax We Post’ oo Dalxiisayaasha u sahlaya in looga shaqeeyo Koontadooda Baraha Bulshada xilliyada ay ku jiraan fasaxyada. Ku xirnaanshaha xad dhaafka ah ee baraha bulshada wuxuu keensaday in la qabatimo oo aan la helin waqti looga nasan karo – ama la’aantiis maalin gelinkeeda dunida dhabta ah lagu sugnaan karo. Mid kamid ah hoteellada ku yaalla dalka ...
Adeegga ‘Relax We Post’ oo Dalxiisayaasha u sahlaya in looga shaqeeyo Koontadooda Baraha Bulshada.
Himilo November 20, 2018	Leave a comment 290 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Relax We Post” waa adeeg cusub oo hoteellada Swizz-ku ay u fidiyaan martida ku nasaneysa kuwaas oo raba inay ka nafisaan dunida baraha bulshada kuna raaxaystaan fasaxyadooda – isla mar ahaantaana aanan dooneyn inay ka maqnaadaan qadka. Dhammaan waxa kaliya oo ay u baahan yihiin ayaa ah inay xogaha koontadooda instagram-ka ku aaminaan howl-wadeennada hoteelka u qaabilsan shaqada ...
Masha Allah – Duuliye Shahaadada loogu qabtay Hawada sare ee Sucuudiga!
Himilo November 20, 2018	Leave a comment 369 Views
RIYAD (Himilonetwork) – Duuliye u dhashay dalka Brazil ayaa qabsaday indhaha dadyowga caalamka kaddib markii isaga oo hawada sare ku duulinaya diyaaradda uu cabbaar hakad geliyay si Shahaadada loogu qabto dusheeda xilli ay dul maraysay hawada Sucuudiga. Captain Amalo, oo duulinaya diyaarad aan magaceeda la sheegin waxaa la duubay isaga oo aqrinaya Shahaadada. Waxaana u qabanayay saaxiib la saarnaa diyaaradda. ...
Himilo November 20, 2018	Leave a comment 346 Views
Rajasthan (Himilonetwork) – 95 jir kasoo jeeda miyiga gobalka Rajasthan ayaa dhawaan lala fajacay kaddib markii uu soo miyirsaday xilli lagu jiray dhaqista meydkiisa kolkii dhaqaatiirtu ay sheegeen inuu dhintay. Budh Ram, oo kamid ah dadka degaanka Bhaktanwalan Ki Dhani, ayaa miir-daboolmay habeenkii Sabtida kaddib markii uu ka sheegtay feeraha. Markii qoyskiisu ay ugu yeereen dhaqtarka, wuxuu baaritaan kaddib ku sheegay inuusan ...
Himilo November 20, 2018	Leave a comment 343 Views
California (Himilonetwork) – Bulshada cajibka ah ee ku nool Seal Beach, California, waxay milkiilaha xarun iibisa doolshooyinka ku caawinayeen muddo badan inuu waqti ku filan la qaato afadiisa xanuunsan – iyaga oo xilli hore ka iibsada dhammaan dalabka maalinkaas usoo dhaca si uu xilli hore inta uu u xiro kaddibna ugu tago gacalisadiisa. John iyo Stella Chhan waxay muddo 30 sanno ...
Himilo November 19, 2018	Leave a comment 377 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Nin u dhashay dalka Holland oo 69 jir ah ayaa go’aansaday arrin liddi ku ah shuruucda iyo qawaaniinta kagadaal markii uu dalbaday in 20 saano laga jaro da’diisa dhabta ah. Waxa uu sheegay in muuqaal ahaan jirkiisu yahay dhallinyaro isagoo sita warqado caafimaad oo been abuur ah. Emile Rutland, Waa hawlwadeen dawladeed oo ka shaqeeya horumarinta aadanaha, ...
Dhib ceynkee ah ayaa ka dhalan kara dawo uusan Dhaqtar kuu qorin?!
Himilo November 19, 2018	Leave a comment 485 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Qaadashada dawo waxaa keena xaalado caafimaad oo daruuri ah hase ahaatee in la qaato iyada oo uusan ku talin dhaqtar waxaa ka dhalan kara dhibaatooyin caafimaad oo ka khatarsan xanuunka loo qaatay. Dad badan ayaa iyaga oo ka fogaanaya safka dheer ee loo galo isbitaalada iyo kharashaadka ku baxa baarista caafimaad waxay tagaan farmashiyaha iyaga oo daqiiqado ...
Himilo November 19, 2018	Leave a comment 1,119 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Waa cudur qufac iyo xummad leh oo saableyda dadka ku dhaca siiba sanbabada sal-dhigta waxa uuna badanaa beegsadaa carruurta ka yar shan sanno, 99% waxa uu ka jiraa dalalka soo koraya ee ay Soomaaliya ka mid tahay. Fahanka Soomaalidu ay ka haysato xanuunkan waxaad moodaa inuu aad u hooseeyo, badankeen waxaan ku qaladnaa cudurro kale sida Buro-kiito, ...
Himilo November 19, 2018	Leave a comment 466 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Wasaaradda waxbarashada dalka Japan ayaa dabool qaaday kororka ku socda ardayda is-daldalaya ee da’da yar taas oo iminka mareysa heerkii ugu sarreysay marka la eego 30 sano ee lasoo dhaagay. Sanaddii ina dhaaftay oo keliya waxa naftooda haligay250 arday, kuwaas oo dhigta dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, waana tiradii ugu badneed tan iyo sanaddii 1986, markaas oo ...
Haweeney – si ay Masjid u dhisto – muddo 30 sanno ah ururin jirtay lacagta biilka!
Muslimiinta Ghana oo helay Tarjumada Qur’anka Kariimka oo afkooda ku qoran.
La kulan – Dadka doonaya inay bishan Soonqaad Qur’anka aqriyaan hal jeer ka badan.
Haweeneydii si la-yaab leh madaxeedu ugu xayirmay….
Haweeney wacday nambarka degdegga ah ee 999 kadib markay ka cabsatay Bisad